Ma jiro Dalxiis, Ma jiro COVID, laakiin waa bilaash ugu dambayn: Jamhuuriyadda Nauru
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Nauru » Ma jiro Dalxiis, Ma jiro COVID, laakiin waa bilaash ugu dambayn: Jamhuuriyadda Nauru
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Nauru • News • Dadka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Ma jiraan meelo badan oo ku haray adduunkan, halkaas oo COVID uusan weli arrin ahayn, oo COVID -ka xor yahay. Mid waa Jamhuuriyadda Jasiiradda Nauru.
Nauru ayaa weli ahmiyad weyn u leh dalxiiska caalamiga ah.
Nauru waa jasiirad aad u yar iyo dal madaxbannaan waqooyi -bari Australia. Waxay ku taalaa 42 kiiloomitir koonfur dhulbaraha.Ref coral reef wuxuu ku hareeraysan yahay jasiiradda oo dhan oo ay ka buuxaan cidhifyo.
Dadweynaha-qiyaastii 10,000 oo ay ku jiraan dadka aan Nauruanka ahayn ee qiyaastii ah. 1,000
Ma jiro kiisas Coronavirus oo dalka ka jira, laakiin Dowladda Mareykanka ayaa ku talineysa in la tallaalo marka loo safrayo Nauru
Markaad raadineyso tirakoobka adduunka ee Coronavirus, hal waddan oo madaxbannaan ayaa had iyo jeer maqan. Dalkani waa Jamhuuriyadda Nauru. Nauru waa jamhuuriyad jasiirad ah oo ku taal Koonfurta Badweynta Baasifigga
Dadka Nauru waxay ka kooban yihiin 12 qabiil, sida uu astaan ​​u yahay xiddigta 12-ka gees leh ee calanka Nauru, waxaana la rumeysan yahay inay isku jiraan Micronesian, Polynesian, iyo Melanesian. Luuqadooda hooyo waa Nauruan laakiin Ingiriisiga ayaa si weyn loogu hadlaa maadaama loo isticmaalo ujeeddooyin dowladeed iyo ganacsi. Qabiil kastaa wuxuu leeyahay ugaas u gaar ah.
Calanka Nauru waa mid aad u fudud oo cad, oo leh midabada Navy Blue, Yellow, and White. Midabada mid walba waxay leedahay muhiimad. Navy Blue wuxuu matalaa badweynta Nauru. Khadka huruudda ahi wuxuu ku yaalaa badhtamaha Equator -ka sababtoo ah Nauru waxay ku dhowdahay Equator waana sababta Nauru aad ugu kulushahay. Xiddiga 12 -ka cad ee cadcad wuxuu u taagan yahay 12 -ka qabiil ee Dadka Nauru.
Taasi waa sababta calanka Nauru uu sidan u midabeysan yahay.
Dib-u-bilaabista macdanta fosfooraska iyo dhoofinta 2005 ayaa dhaqaalaha Nauru siisay koritaan aad loogu baahnaa. Kaydka labaad ee fosfooraska ayaa lagu qiyaasaa nolosha haray ee qiyaastii 30 sano ah.
Kayd hodan ah oo fosfooraska ah ayaa la helay 1900 -kii iyo 1907 -kii Shirkadda Pacific Phosphate waxay u rartay Australia dhoofinta ugu horreysa ee fosfooraska. Illaa maanta macdanta fosfooraska ayaa weli ah isha ugu weyn ee dhaqaalaha Nauru.
31 -ka Janaayo waa Maalinta Xorriyadda (Ka soo noqoshada sannad -guurada Truk)
Maalintan qaran ayaa dawladdu u dabbaaldegtaa, iyada oo u qabanqaabinaysa ciyaaro iyo tartamo kooxeed qaybaha iyo qalabka kala duwan ee dawladda. Sidoo kale, waxaa jira diyaafad loo sameeyay dhallinyarada quluubta ku jirta. (Badiyaa ka badbaaday Truk)
17 -ka May waa Maalinta Dastuurka
Maalintan waxaa u dabaaldagaya jasiiradda oo dhan oo leh tartan orod iyo orod oo u dhexeeya 5 -da degmo doorasho.
1da Luulyo waa NPC/RONPhos Handover
Shirkadda Nauru Phosphate waxay la wareegtay macdanta fosfooraska iyo dhoofinta Nauru ka dib markii ay ka iibsatay Guddiga Fosfooraska Ingiriiska. Markaas RONPhos wuxuu kala wareegay NPC 2008dii.
26ka Oktoobar waa Maalinta ANGAM
Angam macnaheedu waa imaanshaha guriga. Maalinta qarankan ayaa xusaysa soo noqoshada dadka Nauru ee qarka u saarnaa dabargoynta. Bulsho walba sida caadiga ah waxay abaabushaa xaflado u gaar ah maadaama maalintani sida caadiga ah lala dabaaldego qoyska iyo ehelka.
Marka ilmuhu dhasho asaga/ayada waxay ka dhaxli doonaan qabiilkooda dhinaca hooyadood. Dharka qabiil walba waa ka duwan yahay kaas oo gacan ka geysta aqoonsiga qof kasta.
Liiska 12 qabiil Nauru:
Eamwit - abeesada/diirka, khiyaanada, siibashada, ku fiican beenta iyo nuqulka qaababka.
Eamwitmwit - cricket/cayayaan, qurux aan micno lahayn, nidaamsan, oo leh buuq aad u daran iyo hab isku mid ah.
Eaoru - baabbi'iye, waxyeello u geysta qorshayaasha, nooca masayrka.
Eamwidara - biyo mareenka.
Iruwa - shisheeye, shisheeye, qof ka yimid wadamo kale, caqli badan, qurux badan, raganimo leh.
Eano - toosan, waalan, xiiso leh.
Iwi - injir (bakhtiyey).
Irutsi - dad cunis (bakhtiyey).
Deiboe - kalluunka madow ee yaryar, niyadda, khiyaameeya, dabeecadda ayaa isbeddeli kara wakhti kasta.
Ranibok - shay lagu dhaqay xeebta.
Emea - isticmaala rake, addoon, caafimaad qaba, timo qurux badan, khiyaameeya saaxiibtinimada.
Emangum - ciyaaryahan, jilaa
Dhammaan codsiyada fiisaha oo ay ku jiraan shaqaalaha warbaahinta booqanaya, codsi iimayl oo lagu galo Nauru waa in loo diraa Socdaalka Nauru.
Doolarka Australia waa hindise sharciyeedka Nauru. Sarrifka lacagaha qalaad meel kasta oo uu joogo way adkaan doontaa. Lacag caddaan ah ayaa ah qaabka kaliya ee lagu bixiyo Nauru.
Kaararka amaahda/debit lama aqbalo.
Waxaa jira laba huteel, mid dawladu leedahay iyo mid qoys leeyahay.
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo kale oo hoy (nooc unug) oo si gaar ah loo leeyahay.
Had iyo jeer waa xagaaga Nauru, guud ahaan agagaarka 20-ka sare-bartamihii 30-meeyadii. Dharka xagaaga ayaa lagula talinayaa.
Dharka xagaaga/xirashada aan caadiga ahayn waa la aqbali karaa laakiin haddii ballan laga samaynayo saraakiisha Dawladda ama ka qaybgalka adeegyada kaniisadda, waxaa lagu talinayaa in si habboon loo labisto. Dabaasha ma aha wax caadi ka ah Nauru, dabaasha ama waxay ku dul xidhan karaan saran ama gaaban.
Ma jiro gaadiid dadweyne. Kiraynta baabuurka ayaa lagula talinayaa.
Geedaha miroodku waa qumbaha, cambaha, pawpaw, liinta, rootiga, maraqa dhanaan, pandanus. Qoryaha adag ee asaliga ahi waa geedka tomano.
Waxaa jira geedo/dhir ubaxyo kala duwan ah laakiin kuwa sida aadka ah loo isticmaalo/loo jecel yahay waa franjipani, iud, hibiscus, irimone (jasmine), eaquañeiy (laga bilaabo geedka tomano), emet iyo dawanno jaale ah.
Dadka Nauruhu waxay cunaan cuntooyin kala duwan oo badda ah laakiin kalluunku weli waa cuntada Nauruhu jecel yihiin - cayriin, la qalajiyey, la kariyey.
Ma jiro kiis COVID-19 oo la yaqaan oo ku saabsan Nauru, wax warbixin ah looma gudbin Ururka Caafimaadka Adduunka, laakiin Dowladda Mareykanka waxay kula talineysaa muwaadinkeeda in xaaladdan aan la garanayn ay tahay mid halis ah, xitaa safrayaasha si buuxda loo tallaalay
Waxaa jira baaritaanno PCR iyo/ama antigen laga heli karo Nauru, natiijooyinka waa la isku halleyn karaa oo gudahood 72 saacadood.
Tallaalka Oxford-Astra Zeneca ayaa laga heli karaa dalka
Nauru waxay leedahay sheeko qaran:
Beri baa waxaa jiray nin la yiraahdo Denunengawongo. Wuxuu ku noolaa badda hoosteeda xaaskiisa, Eiduwongo. Waxay dhaleen wiil magaciisu ahaa Madaradar. Maalin maalmaha ka mid ah, aabbihiis ayaa kor u qaaday biyaha dushiisa. Halkaas ayuu ku meeraystay ilaa uu gaadhay xeebta jasiirad, halkaas oo ay ka heshay gabadh qurux badan oo la odhan jiray Eigeruguba.
Eigeruguba wuxuu geeyey gurigiisii, markii dambena labadooduba waa is guursadeen. Waxay lahaayeen afar wiil. Curadkii waxaa la oran jiray Aduwgugina, Duwario labaad, Aduwarage saddexaad iyo kan ugu yaraa waxaa la oran jiray Aduwogonogon. Wiilashan markii ay rag noqdeen waxay noqdeen kalluumeysato waaweyn. Markii ay rag noqdeen, waxay waalidkood kala noolaayeen. Sannado badan ka dib, markii waalidkood ay gaboobeen, hooyadood waxay dhashay wiil kale. Waxaa lagu magacaabi jiray Detora. Markii uu koray, wuxuu jeclaa inuu la joogo waalidkiis oo uu maqlo sheekooyinka ay u sheegeen. Maalin maalmaha ka mid ah, markii uu ku sigtay inuu qaangaadho, ayuu dibadda u soo baxay markuu arkay dooni. Wuuna u tegey iyagii, oo waxay siiyeen qaar ka mid ah kalluunkoodii ugu yaraa. Kalluunkii ayuu gurigii u qaaday oo siiyey. Maalintii xigtay, wuxuu sameeyay wax la mid ah laakiin, maalintii saddexaad, waalidkiis ayaa u sheegay inuu la baxo kalluumaysiga walaalihiis. Sidaas darteed wuxuu ku raacay doontoodii. Markii ay soo noqdeen fiidkii, walaalihii waxay Detora siiyeen kalluunkii ugu yaraa. Sidaas darteed Detora wuxuu aaday gurigiisii ​​wuxuuna u sheegay aabihiis. Markaas ayuu aabbihii baray sida loo kalluumaysto, wuxuuna uga sheekeeyay awoowayaashiis, oo ku noolaa badda hoosteeda. Wuxuu u sheegay in, mar kasta oo qadka uu ku dheggan yahay, inuu ku quuso. Oo markuu yimid guriga awooweyaashiis, waa inuu soo galo oo ka codsadaa awowgiis inuu siiyo jillaabyadii uu afkiisa ku haystay; oo waa inuu diidaa qabsatooyin kale oo isaga la siiyey.
Maalintii xigtay, Detora aad buu u soo toosay wuxuuna u tagay walaalihiis. Waxayna siiyeen xadhig kalluumaysi oo ay ku xidhan yihiin guntiyo badan; Baddadii, dhammaantood waxay ku tuureen xarriiqdoodii, oo had iyo jeer, walaalaha ayaa kalluun qabta; laakiin Detora waxba ma qaban. Ugu dambayntii, wuu daalay oo xarriiqdiisii ​​baa qabatay. Markaasuu walaalihiis u sheegay, laakiin isagay ku majaajiloodeen. Markii dambe wuu quusay. Intuu saas yeelay, waxay isku yidhaahdeen, Waa maxay nacasku, waa walaalkeen? Markii uu quusay, Detora wuxuu gaaray guriga ayeeyadiis. Aad bay ula yaabeen markii ay arkeen inan oo kale oo gurigooda imanaya.
'Yaad tahay?' ayay weydiiyeen. 'Waxaan ahay Detora, ina Madaradar iyo Eigeruguba' ayuu yiri. Markii ay maqleen magacyada waalidkiis, way soo dhaweeyeen. Waxay weydiiyeen dhawr su’aalood, waxayna u muujiyeen naxariis aad u weyn. Ugu dambayntii, markuu dhoofayey, isagoo xusuusan wixii aabbihiis u sheegay, wuxuu weyddiistay awowgiis inuu jillaab siiyo. Awowgiis wuxuu u sheegay inuu ka qabsado wixii qabsatooyin ah ee uu jecel yahay saqafka sare ee guriga.
Nauru waa COVID-free. Duulimaad laba toddobaadle ah oo u dhexeeya Nauru iyo Brisbane, Australia ayaa sii shaqaynaysa. Dhammaan dadka u safraya Nauru waxay oggolaansho hore uga baahan yihiin Dowladda Nauru.
Nimankii reer Damo ayaa mar kale soo tuuray khadkoodii, markanna waxay qabteen kalluun nooc kale ah. Midkan magaciisa maxaa la yidhaahdaa? ayay weydiiyeen. Detora ayaa ku jawaabay, 'Eapae!' Mar labaad magacu wuxuu ahaa kii saxda ahaa. Tani waxay ka xanaajisay kalluumeysatada Damo. Detora godadkiisii ​​aad bay ula yaabeen xariifnimadiisa. Detora ayaa hadda tuuray xarriiqdiisii ​​oo soo jiiday kalluun. Wuxuu weydiiyey nimankii Damo magaceeda. Waxay ku jawaabeen 'Irum' laakiin markii ay mar kale eegeen, waxay ogaadeen inay khaldan yihiin, maxaa yeelay waxaa ku yaal dhammaadka xariiqa madow madow. Mar kale Detora wuxuu ku tuuray xarriiqdiisii ​​mar labaadna wuxuu ka codsaday inay magacaabaan kalluunka. 'Eapae,' ayay yidhaahdeen. Laakiin markii ay eegeen waxay ka heleen dambiil hilib doofaar oo ku taal dhammaadka khadka Detora.
Waqtigan xaadirka ah raggii reer Damo aad bay u baqeen, waayo waxay garteen inuu Detora sixir adeegsanaayo.
Doontii Detora ayaa lagu soo jiiday ta kale, isaga iyo walaalihiis waxay dileen nimankii Damo waxayna qaateen dhammaan qalabkii kalluumaysiga. Dadkii xeebta joogay markay arkeen waxaas oo dhan, waxay ogaadeen in raggoodii looga adkaaday tartankii kalluumeysiga, waayo waxaa caado u ahayd maalmahaas in kuwa ku guuleysta tartanka kalluumeysiga oo kale ay dilaan kuwa ka soo horjeeda oo ay qaataan qalabka kalluumeysiga. Sidaas daraaddeed waxay u direen doon kale. Isla sidii oo kale ayaa dhacday, waxayna reer Damo aad u baqeen oo xeebta ka carareen. Markaas Detora iyo walaalihiis ayaa doontii ay wateen u jiideen dhanka xeebta. Markii ay soo gaareen xeebta, Detora wuxuu huwiyey doonnida isaga iyo afar walaalihiis hoosta; doontu waxay isu rogtay dhagax. Detora ayaa kaligiis ka degay jasiiradda. Wax yar ka dib, wuxuu la kulmay nin isaga ku xujeeyay tartan qabashada aragga iyo kalluunka ku yaal xeebta. Mid bay arkeen oo labadooduba waxay bilaabeen inay eryaan. Detora wuxuu ku guuleystay inuu qabto, markaasuu dilay ninkii kale wuuna baxay. Meel ka durugsan xeebta, Detora ayaa sidoo kale ku guuleystay tartanka, wuxuuna dilay ninkii la tartamayay.
Detora wuxuu hadda u dhaqaaqay inuu jasiiradda sahamiyo. Gaajo darteed, wuxuu fuulay geed qumbaha wuxuuna hoos u soo tuuray miro bisil, caanihii uu cabay. Buunshaha qumbaha, wuxuu ku sameeyay saddex dab. Markii dabku si aad ah u gubanayay, ayuu ku soo tuuray hilib qumbaha ah, taasina waxay urisay macaan. Dabadeed wuxuu ku jiifsaday cammuudda meel dhawr tallaabo u jirta dabka. Wuxuu ku sigtay inuu hurdo markii uu arkay jiir cawlan oo dabka u soo socda. Wuxuu cunay qumbaha labadii dab ee hore, markii uu damcay inuu cuno qumbaha dabkii saddexaad, Detora ayaa qabtay oo wuxuu doonayay inuu dilo. Laakiin jiirkii yaraa wuxuu Detora ka baryay inuusan dilin. 'I sii daa, fadlan, wax baan kuu sheegayaa' baa la yidhi. Detora ayaa sii daayay jiirkii, kaas oo bilaabay in uu cararo isaga oo aan fulin ballantii uu qaaday. Detora ayaa mar kale qabtay jiirkii, oo soo qaatay qori yar oo fiiqan, wuxuu ku hanjabay inuu indhaha jiirka ka dhex dalooli doono. Jiirkii ayaa baqay oo yiri, 'Dhagaxaas dhagaxa weyn ka rogo oo arag waxaad heshid'. Detora ayaa dhagaxii ka giringiriyey oo helay marin dhulka hoostiisa mara. Markii uu godkii soo galay, wuxuu maray waddo cidhiidhi ah ilaa uu ka yimid waddo ay dad hore iyo gadaal u socdeen.
Detora wuu fahmi waayay luuqadda ay ku hadlaan. Ugu dambayntii wuxuu ka helay nin dhallinyaro ah oo ku hadla afkiisa, isaga ayaana Detora u sheegay sheekadiisa. Wiilkii dhallinyarada ahaa wuxuu uga digay khataraha badan ee dhulka cusub, wuxuuna ku hagay wadadiisa. Detora ayaa ugu dambayntii yimid meel uu ku arkay madal ay ku daboolan yihiin darmo wanaagsan oo naqshado qurux badan leh. Waxaa madasha fadhiyay Boqorad Louse ah, iyada iyo addoommadii ku wareegsanaa.
Boqoradda ayaa soo dhoweysay Detora, waxayna jeclaatay isaga. Markii, dhowr toddobaad ka dib, Detora uu jeclaa inuu ku laabto gurigiisa, Louse-Queen uma oggolaan inuu baxo. Laakiin, ugu dambayntii, markii uu u sheegay afartii walaalihiis dhagaxa hoostiisa oo aan la sii dayn karin sixirkiisa mooyaane, waxay u oggolaatay inuu sii socdo. Tiro dad ah oo uu la kulmay ayaa doonayay in ay waxyeello u geystaan ​​shisheeyaha, laakiin Detora ayaa dhammaantood kaga adkaaday sixir.
Markii ugu dambaysay waxay yimaadeen dhagaxii uu Detora kaga tagay walaalihiis. Hoos ayuu u foorarsaday, wuxuu ku celiyay sixir sixir ah, dhagaxii weynaa wuxuu isu beddelay dooni ay ku jiraan afar walaalihiis ah. Walaalaha ayaa si wada jir ah ugu dhoofay dhulkoodii.
Maalmo badan markay badda ku jireen, waxay meel fog ka arkeen jasiiraddii guriga. Markii ay u soo dhowaadeen, Detora wuxuu u sheegay walaalaha inuu ka tegayo oo u dhaadhacayo si uu ula noolaado awoowgood iyo hoosta badda. Waxay isku dayeen inay ku kallifaan inuu la sii joogo, laakiin wuxuu ka booday dhinaca doonnida, oo hoos buu u degay. Walaaluhu waxay u tageen waalidkood waxayna ka sheekeeyeen waxyaabihii ay soo mareen.
Markii Detora uu gaaray guriga ayeeyadiis, ayeey si fiican u soo dhaweeyeen. Ka dib markii ayeeyooyinka iyo awoowayaashu dhinteen, Detora wuxuu noqday boqorka Badda iyo Ruuxa Weyn ee Kalluumeysiga iyo Kalluumeysatada. Oo maalmahan, mar kasta oo khadadka kalluumaysiga ama qabsatooyinku ka waayaan doon, waxaa la ogaadaa inay jiifaan saqafka guriga Detora.